Livestream Schwarmhilfe Archive - Xuquuqda Aadanaha & Farshaxanka Fudud ee ∴ PixelHELPER Foundation
Caawinaad aad loola tacaalo
Noocyada xayeysiinta ah waxay ku caawiyaan horumarinta software-ka
Post Sticky By Oliver Bienkowski On 4. January 2016
Caawinta daacuunka ee xagjirnimada. Barnaamijka isuduwidda ficilada dhacdooyinka dadweynaha
Iyadoo lagu rakibay barnaamijka PixelHELPER Livestream Schwarmhilfe ee ku yaala bartamaha Waqooyiga Afrika, waxaanu abuuray xaqiiqooyin ku saabsan tijaabo sahlan ee mashruuceenna. Waxaan hadda ka shaqeyn karnaa dhibaatooyinka qaaradda Afrika iyada oo adeegsaneysa barnaamijkeena caawinta. Waxaan samaynay goobo kala duwan oo isdhexgal ah oo ku yaala goobta wax soo saarka ee interactive. Dukaanka dharka, rugta alxanka, roodhida, algae taranka, 3 ee cabirada shabakadaha waxay isku xiraan kamaradaha 20 si ay u muujiyaan dadkayaga had iyo jeer sawirada ugu dambeeyay ee wax soosaarka noolaha.
15 mitir mashiinka korontada ku shaqeeya ee gadaal gadaal leh madaxa darajada 360 darajada & WiFi
Booqashooyinka beeraha waa kuwo aad u adag, kirada ugu yar laakiin waxay iibisaa oo keliya
Qalabka qaboobaha 23.06.18 ayaa yimid Morocco
Waxaan u kaxeynay jikada maraq-kicinta horumarka ee 600 dadka gaajada ah ee Morocco. jikada wuxuu ku yaalaa laba todobaad in caadooyinka iyo u baahan yahay in la Koryeelo noo by, kharashka ka dhigan in ay ku saabsan € 400. Gawaarida xayawaanka leh qalabka loogu talagalay beerkayaga Spirulina horeba waxaa ku yaal Marrakech. Waxaanu hadda raadineynaa beer lagu dhisayo Spirulina Farm. The deeqaha yar yahay guud ee ku saabsan deeqaha 2500 € ee 2017 aan la dhaqaajin karin si tartiib tartiib ah oo keliya in mashruuca hore. Waxaan fileynaa kirada ugu yaraan 600-1200 € taas oo ku xiran meesha uu ku yaal beerta. Sida aan 4G Internet dhakhso u baahan beerta inaan samayno baaritaan xawaare meel kasta, sida aynu ka dib waxaa ugu yaraan 20 kamaradaha IP gudaha socda, una dir laba durdurrada dibadda in Facebook iyo dhifasho.
Faa’iido darrada ugu weyn ayaa ah inay jiraan beero aad u tiro yar oo aan lagu beeran geedo saytuun ah ilaa kor, laakiin leh meel furan oo koronto iyo biyo leh.
Waxaan horay u fiirinay beeraha 10 oo keliya kan ku habboon wuxuu ahaa iibka loogu talagalay 80.000 € oo la bixiyay oo aan la kireyn.
18.06.18 Customs ayaa wali qabta jikada, taangiyada ayaa si sahlan u dhoofiya
Tirooyinka hadda & maalgashiga
Hadda waxaan durbadiiba maalgelinay 25.000 € qalab loogu talagalay Spirulina Farm iyo 25.000 € kharashaadka saadka, iibsashada gawaarida iyo qalabkayaga waqooyiga Afrika.
Waxaan ubaahanahay caawimaad sida ugu dhaqsaha badan si aad u soo dirto saacadda 24 ee ka soo guuray Morocco. Sida ugu dhakhsaha badan Spirulina Beeraha waa mid firfircoon, waxaan ku wadi doonnaa qolka maraqyada ee loo yaqaan 'Defender Tractor' si Senegal. Ma helno ogolaansho joogitaan joogta ah ee Morocco waxaanan sii wadi doonaa koofurta Mauritania, Senegal iyo Gambia waana isku dayi doonaa
si aad u hesho meel iyo Daueraufenthalsememigung. Sida muuqata, way sahlan tahay in taangiyada loo dhoofiyo Afrika ka badan sahayda gargaarka bani'aadamnimada.
Mashiinka korontada ee tamarta korontada ku shaqeeya ee buugta buugaagta ee nolosheena nool
Qalabka sawirada ee 360 oo ku saabsan weelka wareegga. Xiriirka Wi-Fi ee gaariga loogu talagalay isticmaalka moobiilka
11.05.18/XNUMX/XNUMX Difaaca & Caravan si loo ilaaliyo kharashka sida ugu macquulsan Afrika
Tusaale ahaan wax soo saarka tuubada by Spirulina si aan loo dhisin basinsiyada la taaban karo
Humanism aragnimo la wada Streaming LIVE, AZANIYA, qaybinta badan emoticons ee Facebook. Zombies ogaan lahayn jinsiyad, midab ama Religion.Nur maskaxda! zombies The aan mashruuca Xuduudda, laftiisa arko sida gogol raxan kaabayaal interactive. Magaca waa derivation ee hannaanka a kombiyuutarada Zombie shisheeye gacanta. Hadafkayagu waa wax aan ka yarayn xal u dhan masiibooyinka bani'aadamnimada iyada oo gargaar interactive ah daawadayaasha ku il live. Hadafkayagu: saacad 24 il live ah sari Punken dunida. Weheliyay suxufiyiinta goobaha dagaalka, qaybinta gargaarka bani'aadamnimada ee xeryaha qaxootiga ama ugaarsiga loogu jiro ugaaratada Seeraha Qaranka ee Kruger ah, fursadaha gacanta raxan waa ballaadhan yahay Our qalab: walxood The dareen ee Facebook xakameeyo raxan ka kaabayaal iyo go'aan ka gaarto waxa la sameeyaa.
Hadafka Zombies oo aan xuduud lahayn waa sidaas darteed meelo badan, iyada oo la adeegsanayo tiknoolojiyada horumarsan, oo ay ku jirto beteriga moobilka oo qaadaya dharka; waayo, RTMP Facebook ku nool durdur si loo xakameeyo gacanta ku camera wireless gudaha, software database interactive xakamaynta raxan, dar-ons kooxo badan oo dad ujeedooyin wanaagsan via browser si ay u xaliyaan dhibaatooyinka ugu waaweyn ee ka dambeeya waqtiga.
Meelaha ugu horreeya ee durdurrada tooska ah waa Senegal, Falastiin iyo xarunteenna macquulka ah ee Yurub ee Morocco. PixelHELPER waxay rabtaa inay siiso dhamaan wadamada kale gargaarka bini'aadanimo meesha ay ku taal Morocco. Marka loo socdo Madagascar, waxaan dooneynaa inaan ku rakibno ugu yaraan hal meel oo is-dhexgal toos ah oo waddan kasta ah. Goobaha tooska ah waa inay abuuraan fursado shaqo sida beer algae ah & soosaarida wax soo saar si wada jir ah qaxootiga si ay kuu siiyaan mustaqbal wanaagsan qaaradda Afrika. Wax kasta oo ku jira durdurka tooska ah, marwalba waad joogtaa oo go'aan ka gaadh waxa dhaca. Goob kasta waxaa lagu muujiyaa durdurinta tooska ah maalintii, telefishanka isdhexgalka iyadoo ujeedadu tahay hagaajinta adduunka iyada oo loo marayo caawimaad raxan ah. Madagascar waxaan rabnaa inaan ku isticmaalno daweynta wejiga Joorijiyaanka goobta si aan uga ilaalino dadka cudurka sanbabka ee ka dilaaca halkaas sanad walba. Iyada oo loo marayo cibaadada dadka dhintay, dadka deggan jasiiradda waxay la xiriiraan cudur-sidaha diley malaayiin dad ah Yurubtii qarniyadii dhexe.
Caawinta waqtiga firaaqada ah ee dhabta ah ee ku jira muuqaalka fiidiyowga ee shabakadaada.
Farsamo ahaan waxay u shaqeysaa sidan oo kale waxaan bilaabi karnaa durdur toos ah oo leh walxo xakameyn hufan ka dibna ku martiqaadno shaqsiyaadka "Zombies without border" shaqaalaheena si toos ah. Sidan oo kale, waxaan isha ku haynaa qoorta hawleedyada wadajirka ah waxaanan si dhakhso leh uga falcelinnaa isbeddelada durdurinta tooska ah ee goobta dhibaatadu ka taagan tahay.
2014-2015 waxaan ku soo aragnay khibradihii ugu horreeyay ee gargaarka cayayaanka noolaha ah
Sawir Sawir: https://web.facebook.com/patryk.witt
Sawirada & astaanta: https://web.facebook.com/SNOB.desillustration
Noocyada xayeysiinta ah waxay ku caawiyaan horumarinta software-ka Febraayo 3rd, 2019Oliver Bienkowski